Dhacdooyinka Waxbarashada - Carewell SEIU 503
Carewell SEIU 503 waxay faa’iido u leedahay waxbarashada iyo taageerada
Kahor COVID-19, qabanqaabiyayaasha diiwaangelinta waxay u safreen Oregon oo dhan si ay ula kulmaan daryeelka guriga ee u qalma iyo shaqaalaha taageerada shaqsiyadeed. Hadafkeenu wuxuu ahaa inaan bixino waxbarasho ku saabsan faa’iidooyinka Carewell SEIU 503 oo aan uga jawaabno su’aalahaaga wadahadal fool ka fool ah. Xaalada caafimaadka bulshada ee hada jirta awgeed, shirarka shaqsiga ah waa la joojiyay ilaa ogeysiis dambe.
Waxaan rajeyneynaa inaan mar labaad dhacdooyin shaqsi ah ku qabanno mar haddii ay ammaan tahay in sidaas la sameeyo. Waqtigan xaadirka ah, waxaan ku bixinaynaa munaasabado khadka tooska ah ah oo loo maro Zoom si lagaaga caawiyo inaad wax badan ka barato faa’iidooyinka Carewell.
SIDEE LOOGU BIXI KARAA WEBINARS-KA GURIGA?
Taleefan ahaan: Garaac lambarka taleefanka webinar oo gali ID-ga webinar.
By PC, MAC, iPad, iPhone ama qalabka Android: Ku rakib barnaamij Zoom ah ka dibna gal koontadaada Weyn. Qof kasta oo horeyba uga diiwaangashanaa emayl firfircoon, u tag bogga xaqiijinta webinar oo guji xiriirinta si uu ugu biiro.
Haddii aad wax dhibaato ah ku qabto ka mid noqoshada websaydhka, fadlan wac 1-844-503-7354.
Si aad u daawato sida loo rakibo loona isticmaalo Zoom taleefankaaga casriga ah, tag halkan
Si aad u daawato sida loo rakibo loona isticmaalo Zoom kombiyuutarkaaga ama kiniinigaaga, tag halkan .
Mawduucyada iyo jadwalka ku soo kordhay WEBINARS
Dhacdooyin badan ayaa lagu bixin doonaa Isbaanish, Ruush, Fiyatnaamiis, Shiine, iyo Ingiriis. Kafiiri boggan si joogto ah macluumaadka ugu dambeeyay ee ugu dambeeyay!
DULMARKA DARYEELKA DARYEELKA SEIU 503, ILAALINTA + MAQALKA, IYO BARNAAMIJKA CAAWIMAADKA SHAQAALAHA
Yuu ku biirayaa? – Dhamaan Daryeelka Guriga iyo Shaqaalaha Taageerada Shakhsiyeed
Maxaa ku saabsan – Wakiillada barnaamijyadaada Caawimaada ilkaha, Aragtida iyo Shaqaalaha Gargaarka Shaqaalaha ayaa kugu dhex socon doona adiga oo marinaya cusbooneysiinta dheefahaan oo ka jawaabi doona su’aalahaaga.
Guji bidix si aad u aragto macluumaad dheeraad ah
Lambarka taleefanka Zoom
Arbaco, Oktoobar 27 2-3: 30 galabnimo Fiyatnaamiis Xiriir Taleefan: 1 253 215 8782 Aqoonsiga: 992 9347 0719
Arbaco, Nofeembar 10 2-3: 30 galabnimo Ingiriis Xiriir Taleefan: 1 669 900 6833 Aqoonsiga: 948 6780 6478
Arbaco, Nofeembar 17 2-3: 30 galabnimo Isbaanish Xiriir Taleefan: 1 253 215 8782 Aqoonsiga: 986 9256 8373
Jimce, Diisambar 17 2-3: 30 galabnimo Ingiriis Xiriir Taleefan: 1 669 900 6833 Aqoonsiga: 998 0366 8108
FAA'IIDOOYINKA BIILKA WAALIDKA IYO SU'AALAHA
Maxaa ku saabsan – Ku Kooxda Waxtarrada Carewell ayaa kugula socodsiin doonta cusbooneysiinta billaha ah waxayna kaaga jawaabi doontaa su’aalahaaga ku saabsan faa’iidooyinka.
Khamiista, Oktoobar 21 2-4 galabnimo Ingiriis Xiriir Telefoonka: 1 253 215 8782 Aqoonsiga: 942 8058 4275
Khamiista, Oktoobar 28 2-4 galabnimo Isbaanish Xiriir Telefoonka: 1 669 900 6833 Aqoonsiga: 970 5493 2880
Khamiista, Nofeembar 4 2-4 galabnimo Ruush Xiriir Taleefan: 1 346 248 7799 Aqoonsiga: 982 7372 4725
Talaado, Nofeembar 9 2-4 galabnimo Fiyatnaamiis Xiriir Telefoonka: 1 253 215 8782 Aqoonsiga: 981 3263 3286
Khamiis, Nov. 18 2-4 galabnimo Ingiriis Xiriir Telefoonka: 1 253 215 8782 Aqoonsiga: 925 9000 9817
Talaado, Diseembar 21 2-4 galabnimo Ingiriis Xiriir Taleefan: 1 346 248 7799 Aqoonsiga: 957 3081 0779